Global Voices teny Malagasy » India: Wal-mart, Bangalore ary BarCamp Bangalore II · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2018 11:36 GMT 1	 · Mpanoratra Kamla Bhatt Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Nanome tolokevitra vaovao mba hamahana ny olana Kashmir ny Filoha Musharaff ao Pakistana. Manana fanadihadiana mikasika izany olana izany i Naveen Bharat  avy amin'ny Stratfor. Ity misy sombiny kely mahaliana avy tamin'ny fanadihadian'i Stratfor:
Hanokatra trano fivarotana ao India ihany ny Wal-Mart, ilay goavamben'ny fivarotana antsinjarany avy ao Bentonville, amin'ny alaln'ny fiarahamiasa amin'ilay indiàna mpamatsy tolotra finday lehibe indrindra: ny orinasa Bharti Enterprise renin'ny Bharti Telecom,. Nitarika adihevitra maro mikasika ireo lafy tsarany sy lafy ratsiny amin'ny fanànana ilay trano fivarotana antsinjarany lehibe indrindra manerantany hiasa ao India ilay fikasan'ny Wal-Mart. Manoratra i Niti Bhan fa nahazo tontolo andro feno tsara niaraka tamin'ny fidiran'ny Wal-mart tao India  ny haino aman-jery Indiana.
Manana ny vaovao farany mikasika ny fomba ikasan'ny governemanta Indiana hanakana ireo rohy izay mandrahona ny fandriampahalemana, sns.. i Harish Palaniappan . Faritan’ i Harish ilay vahaolana farany indrindra avy tamin'ny governemanta hanakànana ireo rohy ireo ao amin'ny varavarana Iraisam-pirenena sy ny lafiny tsara ary ny lafiny ratsy amin'ny hetsika toy izany.
Tamin'iny farany herinandro lasa teo iny, nataon'ny Barcamp Bangalora tao Bangalora ny andiany faharoany. Nanatrika kely ilay lasy aho ary nahita fa somary niafinkafina iny Barcamp iny. Manana famehezana tsara mikasika ny Barcamp Banglore II i SIdhi . Manana famehezana mikasika ny Barcamp ihany koa i Shyam  .
An-dàlana ho lasa tanàna voalohany ao India miaraka amin'ny fahafahana feno miditra aterineto tsy mampiasa tariby i Bangalora. Manana lahatsoratra mikasika izany i Murali avy ao amin'ny Thought Garage ary koa ny antony mahatonga ireo mponina ao Silicon Valley  ho voasarika hihetsika tamin'ny alalan'ilay tetikasa Unwired tao Bangalora.
Manoratra i Portland Curry fa mikasa ny hanomboka fanontàna Indiàna ny Vogue , ilay gazetibokin-damaody.
Lehiben'ny famokarana sarimihetsika no sady mitoraka blaogy ihany koa i Shekar Kapur . Manoratra izy fa nahavidy tapakila ho an'ilay sarimihetsika Bollywood Dhoom-2  ihany izy nony farany. Ity misy tolokevitra mahaliana nataony: ovay ho Bodywood ny anarana Bollywood. Manana fanadihadiana ny Dhoom-2 i Sami . Somary niteraka adihevitra noho ny sehatra iray nisy fifanorohana ilay sarimihetsika. Manana lahatsoratra mikasika izany i Sakshi Juneja  ary mizara ny fomba fijeriny mikasika ity sehatra miteraka resabe ity.
Misy ity lahatsary mampihomehy ity zay antsoina hoe ny 12 Andron'ny Krismasy  ao amin'ny YouTube miparitaka any amin'ny Aterineto. Misy mahasamihafa azy ity iray ity: lantompeo sy votoaty Indiana. Ndeha jereo izany dia hiverina miaraka aminà tsiky be ianao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/29/130974/
 Naveen Bharat: https://mg.globalvoices.org http://naveenbharat.blogspot.com/2006/12/stratfors-analyses-of-musharrafs.html
 Wal-mart tao India: https://www.nytimes.com/2006/11/28/business/worldbusiness/28walmart.html
 Harish Palaniappan: http://www.harishpalaniappan.com/blog/archives/india_to_install_url_blockers_on_all_its_8_international_gateways.html
 SIdhi: https://mg.globalvoices.org http://siddhi.blogspot.com/2006/12/bangalore-barcamp-2-roundup.html
 Shyam: https://mg.globalvoices.org http://shyamk.blogspot.com/2006/12/barcamp-bangalore-20.html
 Silicon Valley: https://www.rediff.com/money/2004/jul/30bangalore.htm
 Shekar Kapur: http://www.shekharkapur.com/
 Sakshi Juneja: https://mg.globalvoices.org http://sakshijuneja.com/blog/2006/11/25/aishwarya-hrithik-roshans-kissing-affair/
 12 Andron'ny Krismasy: https://www.youtube.com/watch?v=owK5tHjL0aE